Fambolena voaangom-bokatra | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fambolena voaangom-bokatra
Onion sevok: torohevitra mahasoa momba ny fitomboany
Ny voankazo dia iray amin'ireo legioma ampiasain'ny ankamaroan'ny olona, ​​ary tsy sarotra ny hisainana farafaharatsiny sakafo iray farafahakeliny. Raha ny marina, manana fofona sy fofona mahavariana izy dia nahazo fanamarihana tena tsara rehefa atambatra ny hafanana. Na izany aza, ny fihinanana dia tsy ny fomba mahazatra ampiasana an'io legioma io, satria matetika izy io no ampiasaina amin'ny fitsaboana, toy ny fanafody antiviral ary ho an'ny faniriana fiterahana.
Toeram-pambolena amin'ny fambolena marefo: ny fitsipiky ny fambolena sy fiahiana
Ao anatin'ny toetr'andro dia misy tongolobe roa efa zato taona. Amin'ny herintaona voalohany dia mamafy voa - chernushka. Ny onion sevok dia mitombo amin'ny fahalavoana avy amin'ireo voa, ary amin'ny lohataona amin'ny herintaona dia mamboly eo am-pandriana. Avy eo dia mitombo be ny biriky amin'ny fararano. Zana-borona be dia be ny ankamaroan'ny firenena eran-tany. Mihamitombo izy io ary ampiasaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny sakafo.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fambolena voaangom-bokatra